“နှလုံးသား လက်ဆောင်” အပိုင်း(၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “နှလုံးသား လက်ဆောင်” အပိုင်း(၅)
“နှလုံးသား လက်ဆောင်” အပိုင်း(၅)
Posted by aung nainglin on May 26, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
“အေးပါကွာ………ငါတို့ လဲ အခုမှထိုင်တာပါ………ဖြေးဖြေးပေါ့…”
သူကပဲ စ တင်ပြီးမိတ်ဆက်ရတော့သည်မဟုတ်ပါလား။ အဲ့ ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တော့ မင်းခန့် ဆိုတဲ့ ကောင်က အငြိမ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ….
“ကဲ ညီမရေ………….အစ်ကို့ နာမည်က မင်းဇော်ထွန်းပါ…..
ဒီဘက်ကတစ်ယောက်ကတော့ မင်းခန့် ပါ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပေါ့….တစ်ယောက်တော့ကျန်သေးတယ်….သူက ဒီနေ့ မပါလာဘူးလေ……
အဲ့ ဒါကြောင့်ကြုံမှပဲမိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်နော်…….”
“အစ်ကိုတို့ နဲ့ခင်မင်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…..ညီမနာမည်က ရွှေရည်ပါ………..သူကတော့ လင်းငယ်ပါ….အစ်ကိုတို့ လိုပဲ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပေါ့…”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ ….တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ ……ခင်မင်မှုအထိမ်းအမှတ်နဲ့ ကျွန်တော်ကပဲ ဒီဝိုင်းလေးအတွက် ဒကာဖြစ်ပါရစေဗျာ…”
တော်လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဘယ်အချိန်ထဲက ဒကာဖြစ်ချင်နေလဲမသိဘူး ။ ဘယ်သူမှတောင်တိုက်တွန်းစရာမလိုဘူး ချက်ချင်းပဲ စိတ်အားထက်သန်သွားပုံကိုတော့ အံ့သြောလောက်အောင်ပါပဲလေ။ သူ့ စိတ်ထဲမှာတော့ မင်းခန့် ကို ကောင်းကောင်းနှိပ်ကွပ်ချင်စိတ်တွေနဲ့ငြိမ်နေလိုက်မိသည်။
“ကောင်းပါပြီလေ….နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ညီမတို့ အလှည့် ပေါ့….ဟုတ်တယ်မလား…….လင်းငယ်…”
“ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ”
မင်းခန့် က သတိရသွားသဖြင့်လာရင်းကိစ္စကိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်အားမေးလေသည်။
“ဒါနဲ့ညီမတို့ က ဘယ်သွာမလို့ လဲ…….”
“ဘယ်မှမသွားပါဘူး …..ဒီမှာ3Dလာကြည့် တာ…….အိမ်မှာနေရတာပျင်းလို့ လေ……..”
“3း00နာရီမှလေ ဂျက်လီကားပေါ့…….အသစ်လို့ ပြောတာပဲ သိပ်တော့မသိဘူး……..”
“ဟောဗျာ….ထပ်ပြီးတိုက်ဆိုင်နေပြီ အစ်ကိုတို့ လဲ ဂျက်လီဇာတ်ကား လာကြည့် တာပဲကွ…………..”
“ဒါနဲ့အစ်ကိုတို့ က ခုံနံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ…….”
ပိုက်ဆံအိပ်ထဲမှ ခုံနံပါတ်ကို ထုတ်ကြည့် ကာခင်းခန့် က ဆိုလေသည်။
“၁၈နဲ့ ၁၉ လေ …….ညီမတို့ ကကော………”
“ညီမတို့ က ၁၆နဲ့ ၁၇…………”
“သြော် ……..ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီဆိုတော့ အတူတူကြည့် ရတာကောင်းတယ်လို့ ပြောတာပါ….”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့3း00နာရီ ထိုးတော့မှာမို့ လို့ရုပ်ရှင်ကြည့် ရန် ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့ တော့သည်။ မင်းဇော်ရဲ့၇င်ထဲမှာတော့ နာမည်လေးတစ်ခုက ကဗျည်းမှတ်တိုင်စတင်ပြီး စုတ်ထူမိသွားပါပြိလေ။ ကောင်မလေးရေ ကို ယ့် ရဲ့ ဖူးစာရှင်က မင်းပဲဖြစ်ပါစေတော့ကွာ……………
“ ဟဲ့ …..မင်းခန့် ဘယ်ကလှည့် လာတာလဲ………”
“ဒီကိုပဲလာခဲ့ တာ အန်တီမိုး………….မင်းဇော်ရှိတယ်မလား…..”
“ဟုတ်ကဲ့ အန်တီ ………”
သေလိုက်ပါတော့ကွာ စိတ်ကူးတွေတောင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူး။ သာသနာပျက်ကောင် မင်းခန့်အိပ်ခန်းထဲဝင်လာလို့ ရရဲ့ သားနဲ့ဝင်မလာပဲ အပြင်ကနေသေအောင်ခေါ်နေတတော့တာပဲ။ သူ အပြင်မထွက်ရင်ဆက်ခေါ်နေအုံးမည်။ အဲ့ ဒါကြောင့်အပြင်ကိုထွက်လာရင်း…………….
“မင်းခန့် ရေ….မင်းခန့် …”
“ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာ…….. အိပ်ခန်းထဲမှာ ငါရှိတာသိရဲ့ သားနဲ့ဝင်လာခဲ့ တာမဟုတ်ဘူး အပြင်ကနေသေအောင်ခေါ်နေတယ်……”
“မင်း အိပ်ခန်းထဲကိုဝင်လာရမှာ ငါကြောက်လို့ ကွ…ဟီးဟီး…”
“သေလိုက်တော့ဟေ့ကောင်…..ဒါနဲ့ နေပါအုံး ငါ့ ဆီကိုလာတာ ဘာကိစ္စလဲ…”
“ကောင်မလးနှစ်ယောက် အကြောင်းမလား ……….”
“အေး ဟုတ်တယ် အဲ့ ဒါဖိနပ်ဇာတ်လမ်းထဲက ကောင်မလေးမလား….“
“အဲ့ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ကွာ မင်းကလဲ ငါ ရွှေရည့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ ကွ…..”
“ဒီအတိုင်းတော့မရဘူးဟေ့ကောင်……..ကော်ဖီလိုက်တိုက် အဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းသဘောပဲနော်…”
“အေးပါကွာ တိုက်ပါ့မယ် …….”
ဘယ့် နှယ့် လဲ သင်ခန်းစာပေးချင်နေတာကြာပြီ အခုမှပဲ ပေးရတော့တယ် ။ ပြောသာပြောရတယ် သူလဲ လင်းငယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပဲလေ။ ကောင်မလေးေ၇ မင်းနဲ့ နီးအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကွာ။။……………..
ဒါနဲ့အဲဒီ သရီးဒီကားက တစ်ပွဲ ဘယ်လောက်ပေးရလဲဂျ :?
ကျုပ်နာမည်က လပျိုဂျီး အုဗိုက် ပါ.(ခလေးသုံးယောက်ထဲရှိပါတယ်..)
အင်မတန်မှလဲ ဘောကောင်း မနောကောင်းလှပါတယ်..
အကြွေးယူပြီး ပြန်မဆပ်တာပဲ ရှိပါတယ်..ကျန်တာ အကုန်ကောင်းပါတယ်…မိတ်ချက်ပေးနော်..အူးလေး
အူးဗိုက်ရေ သံတွဲမှာ သရီးဒီဇတ်ကားတစ်ကားကြည့်မယ်ဆိုရင်
၁၀၀၀ကျပ်တောင်မှဗျ။ပို့ စ်ထဲမှာဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေရော—–
အူးလေးကိုင်စရာတို့ ကတော့ မိုက်ဒယ်ဗျာ….
ကန်မလေးနဲ့သွားတောင်ကြည့်ပြီးဆိုပဲ
ကျုပ်တော့ ခါးမှ ကြည့်ဖူးသေးဘူဂျ
ဆက်ပါ ဆက်ပါ ။ ဆက်တဲ့ သူက ဆက်..ဖတ်တဲ့ သူက ဖတ်ပါဦးမည်..
အမှားပါရင်လဲ ခွင့် လွှတ်ပေးပါနော်
ခင်မင်စွာနဲ့ အကြံလေးပြုချင်တာကတော့ အရေးကြီးတဲ့ စကားပြောလေးတွေမှာ သတ်ပုံလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်
ဥမပါ သက်ချင် သက်သွားတို့ 
အခုလိုပြောပြပေးတဲ့ အတွက်လဲ သူငယ်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
သူငယ်ချင်းရဲ့ အသက်က ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ
ကို windtalker မရှိလို့သူ့ စား ဖြေပေးပါရစေခင်ဗျ
ကို windtalker က ၆၁ နှစ်ပါ
ကျနော်ကတော့ ၁၆ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျား..
ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်..ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်သလို တပ်ခေါ်လို့ ရပါတယ်ဗျား.
အထူးသဖြင့် ကို windtalker က အင်မတန် ဘောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျား.
ဦး windtalker ကိုပြောပေးပါနော်
ကျွန်တော်က ဘောကန်တာ သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး
ဟုတ်တယ် အူးဗိုက်ကြီး ပြောတာအမှန်ပါဘဲ
ကျုပ် က သွင်းတယ် သူ က ကုန်းပြီး ဖမ်းတယ်… ဘောလုံးကို ဟီဟိ
ဂိုးဂိုးဂိုး ဟာလေး ဟာလေး